Tsy afaka manaraka ny hetsika Apple ve ianao? Fintinoinay amin'ny fotoana kintana | Vaovao IPhone
Mety tsy naheno ianao fa nampiditra ny iPads vaovao azy i Apple omaly, na mety ho fantatrao, saingy tsy nahita ilay hetsika Apple iray manontolo ianao. Ny fihanaky ny fampahalalana izay mitranga amin'ny tranga iray karazana toy izany indraindray dia manasarotra ny fahafantarana ny zavatra rehetra nolazaina tao anatiny, fa aza manahy, satria amin'ny teny vitsivitsy dia holazainay ny zava-dehibe indrindra momba ny Keynote omaly.
1 IPad Air 9,7-inch vaovao
2 iPad Mini miaraka amin'ny fisehoan'i Retina
3 SmartCase vaovao sy SmartCover ho an'ny iPad Air sy Mini
4 iLife sy iWorks nohavaozina ary afaka
5 Maimaimpoana OS X Mavericks ho an'ny MacBook rehetra sy vaovao
IPad Air 9,7-inch vaovao
Apple dia nanolotra ny iPad 5 vaovao, ary ny tsy ampoizina voalohany dia izany lasa "iPad Air" ny anarany, manome ny fifandraisany indrindra amin'ny fihenan'ny habeny sy ny lanjany. Amin'ny 7,5mm fotsiny matevina sy milanja 469g (478 ho an'ny maodely 4G), ny iPad vaovao koa dia manome ny herin'ny processeur A7, ary ny mpiara-miasa M7 ho an'ny hetsika. Ny endrika dia araka ny antenaina: fomba Mini iPad, ary ny fizakan-tena dia voatazona mandritra ny 10 ora. Ho hita amin'ny volondavenona fotsy sy volondavenona mainty izy ary misy habe manomboka amin'ny 16Gb ka hatramin'ny 128Gb. Ny vidiny dia manomboka amin'ny € 479 (maodely 16Gb WiFi) ka hatramin'ny € 869 ho an'ny maodely 4G misy 128Gb. Azo alaina amin'ny 1 Novambra.
iPad Mini miaraka amin'ny fisehoan'i Retina
Apple dia tsy te-hanome anarana ny iPad Mini vaovao miaraka amin'ny "2" ho tovana. Naleony «iPad Mini miaraka amin'ny fisehoan'i Retina«. Ny fanavaozana dia tsy amin'ny efijery azo oharina amin'ny an'ny zokiny lahy ihany, miaraka amin'ny famahana ny 2048 × 2536 sy ny hakitroky ny pixel 326 dpi, mitazona ny haben'ny efijery 9,7 santimetatra, mazava ho azy. Ny iPad Mini vaovao koa dia hizara ilay mpanamory mitovy amin'ny iPad Air, ilay A7 mahery izay ananan'ny iPhone 5 ihany koa, miaraka amina maritrano 64-bit, sy ny fanampian'ny coprocessor an'ny M7. Miaraka amin'ny 3mm matevina noho ny maodely teo aloha (ary ny hateviny mitovy amin'ny iPad Air) ary ny lanjan'ny 331gr (28 mihoatra ny mini mahazatra) dia mitazona ny fizakan-tenany 10 ora na dia eo aza ny fitomboan'ny fampisehoana. Ny vidiny, hatramin'ny € 389 ho an'ny maodely Wifi 16Gb, ka hatramin'ny 779 € ho an'ny maodely 4Gb 128G.
SmartCase vaovao sy SmartCover ho an'ny iPad Air sy Mini
Apple dia tsy te handao ireo takelaka vaovaony tsy misy fiarovana, ary izany no antony nampidirany ireo fonony vaovao mifanaraka amin'ny iPad Mini sy iPad Air. Amin'ny tranga iPad Mini, mifanaraka amin'ny maodely roa, na ny Mini taloha na ny Mini vaovao miaraka amin'i Retina. Miovaova arakaraka ny maodely ny vidiny, ary na vita amin'ny hoditra izy ireo na tsia, fa manomboka amin'ny € 39 ho an'ny SmartCover (fiarovana anoloana fotsiny) ka hatramin'ny € 79 ho an'ny SmartCase ho an'ny iPad Air (fiarovana tanteraka).
iLife sy iWorks nohavaozina ary afaka
Ny automatisation an'ny biraon'ny Apple sy ny suite multimedia dia nohavaozina tanteraka, na amin'ny endriny na Mac na ho an'ny iOS, ary koa lasa afaka izy ireo ho an'ireo mpampiasa rehetra nividy fitaovana Apple, na solosaina, smartphone na tablety io. Estetika vaovao, asa vaovao ary fanatsarana maro amin'ny rindranasa ho an'ny iOS, izay ahafahanao mamorona rakikira sary ara-batana (alefaso any amin'i Apple ho an'ny famokarana), manova antontan-taratasy amin'ny fomba "fiaraha-miasa" ataon'ny mpampiasa maro, ary fitaovana sy vokany vaovao maro be ho an'ny GarageBand . Isika kely dia hitahiry ny vaovao rehetra ho an'ny iOS amin'ireo rindranasa ireo.
Maimaimpoana OS X Mavericks ho an'ny MacBook rehetra sy vaovao
Apple dia nanolotra ny MacBook Pro nandrasana hatry ny ela miaraka amin'ny processeur Haswell izay mampitombo ny fizakantenan'ny solosaina finday, ary nasehony indray ny Mac Pro mahery indrindra, biby tsara tarehy mbola tsy ho hita, mila miandry hatramin'ny faran'ny taona vao mahazo izany (raha afaka mamela anao). Saingy ny tsy nampoizina dia ny nanambaran'izy ireo fa hisy ny OS X Mavericks fanavaozana maimaimpoana ho an'ny rehetraAvy amin'i Snow Leopard dia azo havaozina amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Mac App Store fotsiny sy ny fisintomana ilay kinova vaovao.
Raha tsorina, ity no famintinana voafintina indrindra azonao atao amin'ny Keynote omaly. ¿Ahoana ny hevitrao momba ireo zava-baovao natolotra? Fahafaham-po? Diso fanantenana? Mangidy? Tianay ho fantatra ny hevitrao.
Mianara bebe kokoa - iPad mini Retina, Great
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Tsy afaka manaraka ny hetsika Apple ve ianao? Fintinoinay amin'ny fotoana kintana izy io
Famintinana tena tsara, noho izany raha heveriko fa misy lesoka rehefa miteny izy ireo hoe "ilay mahery A7 izay ananan'ny iPhone 5 ihany koa," heveriko fa ilay 5S no noresahinao. Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra 🙂
PS: Hatramin'ny omaly dia nametraka olana tamiko ny pejy vaovao, nanandrana solosaina PC roa sy tambajotra samihafa (mpitety Chrome) tsy haiko raha sendra olon-kafa izany sa olako fotsiny.
Bug ve ny iOS 7 ao amin'ny fizarana tsenan'i Apple?